Wasiir Geedoole: Guryaha Uu Dhistay iyo Lacag-raadinta Uu Bilaabay | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Wasiir Geedoole: Guryaha Uu Dhistay iyo Lacag-raadinta Uu Bilaabay
Wasiir Geedoole: Guryaha Uu Dhistay iyo Lacag-raadinta Uu Bilaabay
Waxaynu qormadan iyo maqaallo daba-socdaba ku eegi doonnaa dhaliilaha dul hoganaya Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Somaliland Faarax Cilmi Geedoole oo dhawaan xilkaas loo magacaabay horena u ahaa Wasiirka Beeraha. Masuulkani wuxuu ka mid ah dadka xididka la ah qoyska madaxtooyada ama beesha Siilaanyo, waana mid ka mid ah masaska aan hore loo aqoonnin ee aammuska wax ku dili jiray. Sidoo kale waxaynu faallayn doonaa khaladka ku gedaaman manhajka loo dhigo ardayda iyo guud ahaan xarumaha ay wasaaradda waxbarashadu maamusho. Waxaynu milicsan doonnaa qaar ka mid ah dhaqannada cusub ee uu Wasiirkani
ku soo kordhiyay Wasaaradda Tacliinta.Nin ka mid ahaa Golihii Wasiirrada Siilaanyo balse hadda WADDANI ku jira ayaa nin macallin ah ku yidhi “Ka warran wasiirka cusub ee la idiin keenay”. Macallinkina wuxuu yidhi “isma gaadhnaba, laakiin wuu joogaa”. Ninkii wasiirka hore ayaa yidhi “Intii uu Wasaaradda Beeraha joogay waxa uu dhistay hal fooq iyo laba guri oo waaweyn. Anigu Ilaahay ayaan ka baqday welina guri kiro ah baan ku jiraa”.
Waxyaabaha ugu badan ee lagu xeeriyo waxa ka mid ah in ay ooridiisa tahay gabadh ay ilmaadeer dhow yihiin Wasiirka Madaxtooyada Somaliland, lamana garanayo taageero uu KULMIYE siiyay iyo mid uu gobolkiisa ka haysto marnaba sida xallinta xiisadda Suldaan Wabar iyo xaaladaha kale ee aloosma midnaba.
Waxyaabaha ugu daran ee Wasiir Geedoole la yaabay waxa ka mid ah in aanay wasaaradda waxbarashadu lahayd qarashaad maamul marka laga reebo habeen-dhaxyada safarka. Miisaniyadduna waxay u badan tahay mushaharka shaqaalaheeda oo gaadhaya 7000 qof.
Si uu lacag u raadiyo waxa uu Wasiir Geedoole bilaabay in uu leexiyo lacagta lagu bixiyo tababbarada, waxaanu lix boqol oo macallimiinta dugsiyada hoose/dhexe ah siminaar uga furay Hargeysa, halka uu qaar kalena tababar uga bilaabay Berbera. Tallaabooyinkani waxay sababeen in ay isku dhacaan Professor Saleebaan Axmed Guuleed oo ah Guddoomiyaha Jaamacadda Camuud, isla markaana ay jaamacaddiisu qaranka u qaabbilsanayd tababbarada macallimiinta. Waxaana la sheegayaa in uu jiro khilaaf gaadhay madaxtooyada oo Geedoole xilkiisa ku waayi karo.
Dhanka kale waxa uu Wasiirka Waxbarashadu bilaabay in uu tirakoob ku sameeyo macallimiinta si uu qiil ugu helo in uu qorto shaqaale cusub, iyada oo ay wasaaraddiisu dhawaan hawl-gelisay toddoba iyo labaatan ka mid ah macallimiinta ka shaqeeya dugsiyada gaarka ah ee aan ka xaadirin Iskuullada dawladda oo lagu xushay sifooyin eex iyo qof jeclaysi ah.
Yuusuf Cabdi Muuse
Previous articleTamardarada Xusbiga Wadani Iyo Jilicsanaanta Hogaankooda Oo Markay Kasban Kariwaayeen
Next articleGobolka Joogi Maayo Nin Wasiir Keenay,Nin Qabiil Ku Yimid,Nin Shaqaysanaya Mooyaane…..Ramaax